जेल डिकरको सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू, "कष्टकर साहित्यिक आश्चर्यको बच्चा" वर्तमान साहित्य
जब एक इन्टर्नेट प्रयोगकर्ताले "जेल डिकर पुस्तकहरू" को बारेमा सोधपुछ गर्छ, परिणामले उसलाई निर्देशन दिन्छ ह्यारी क्युबर्ट केसको बारेमा सत्यता। र यो कम होईन, किनभने यो उपन्यासले युवा लेखकलाई एक तारामा परिणत गर्‍यो। काम 40० भन्दा बढी भाषाहरूमा अनुवाद गरिएको छ र विश्वव्यापी रूपमा ,4.000.000,००,००० भन्दा धेरै प्रतिहरू बिक्रि भएको छ।
वर्तमान मा, el न्यूयोर्क टाइम्स उनले यसलाई "उत्तेजक साहित्यिक कवच" को रूपमा सूचीकृत गरे; अन्य मिडिया जस्तै "समकालीन काला साहित्यको सानो राजकुमार।" यद्यपि सुरूमा सबै कुरा राम्रा थिएन, यसले लेखकलाई रोक्न सकेन। यसको विपरित, उहाँबाट खीचेको हरेक रेखा मूल्यको केही हुन्छ। यसको प्रमाण उसको १० करोड भन्दा बढि पुस्तकहरू छन् जुन एक विशाल सफलतामा अनुवाद गर्दछ।
1 जेल डिकरको जीवनी संश्लेषण
1.1 साहित्य मा शुरुआत
2 जेल डिकर द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू
2.1 ह्यारी क्युबर्ट चक्कर (२०१२) को बारेमा सत्यता
2.3 बाल्टीमोर पुस्तक (२०१ 2015)
2.4 स्टेफेनी मेलर (२०१ 2018) बेपत्ता
2.5 कोठा को पहेली 622 (२०२०)
जेल डिकरको जीवनी संश्लेषण
जेल डिकर जून १ 16, १ 1985 .XNUMX मा स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा संसारमा आए जसको औपचारिक भाषा फ्रेन्च हो। यद्यपि उहाँ बच्चाको रूपमा राम्रो विद्यार्थी हुनुहुन्न, उनले सँधै पत्रहरूको लागि ठूलो प्राकृतिक प्रतिभा देखाए। मात्र १० बर्ष उनले स्थापना गरे ला गजेट डेस एनिमेक्स (एनिमल म्यागजिन), उनले लगातार सात बर्षसम्म अध्यक्षता गरे। यस कामले उनलाई प्रकृति संरक्षण "प्रकृति संरक्षण" स्विजरल्याण्डको सबैभन्दा कान्छो सम्पादक-इन-चीफ "को रूपमा प्रिक्स कुनेनो पुरस्कार कमायो।
डिकरको जवानी उसको गृहनगरमा बित्यो, तर १ At वर्षमा उनले पेरिस जाने निर्णय गरे। त्यहाँ उनले थिएटर स्कूलमा अभिनय कक्षा लिए कोर्स फ्लोरेन्ट. एक वर्ष पछि, उनी २०१० मा डिग्री हासिल गरेर जिनेभा विश्वविद्यालयमा कानूनको अध्ययन गर्न स्विजरल्याण्ड फर्के।
साहित्य मा शुरुआत
लेखकको रूपमा डिकरको शुरुआतको बारेमा कुरा गर्दा त्यहाँ एक प्रासंगिक उपाख्यान छ: युवा साहित्य प्रतियोगितामा उनको सहभागिता। यस प्रतिस्पर्धा मा छोटो उपन्यास प्रस्तुत टाइगर, र अयोग्य ठहरियो किनभने मुख्य न्यायाधीशले उनको लेखकत्वको बारेमा श doubts्का प्रस्तुत गरे। यद्यपि परिस्थितिले त्यस जवान मानिसलाई अस्वस्थ पारेको छ, उसले हालसालै त्यो यस्तो ठेस लागिरहेको छ कि अन्ततः उसलाई सुधार गर्न प्रेरित गर्दछ।
२०० In मा, डिकरले भनिने आफ्नो पहिलो उपन्यास पूरा गरे हाम्रा बुबाहरूको अन्तिम दिनहरू, बेलायत गोप्य खुफिया सेवामा आधारित। कुनै पनि प्रकाशकमा रुचि नबुझीकन, २०१० मा उनले उनलाई दर्ता गर्ने निर्णय गरे प्रिक्स डेस इन्टर्भेइन्स जेनेभोइस अप्रकाशित कार्यहरूको लागि। लेखक यस महत्त्वपूर्ण पुरस्कारको विजेता थिए, अन्तमा यसको प्रकाशन एक बर्ष पछि संस्करण डे फालोइसको साथ प्राप्त गर्न।
यहाँ जेल डिकरको सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू छन्:
यो कामले युवा उपन्यासकारको सफलतालाई दर्शायो, विश्वमा बेचेको sold० लाख प्रतिहरू। चालीस भन्दा बढी भाषाहरूमा अनुवादितको साथसाथै, यसलाई २०१ 2015 मा टिभी मिनीसरीजमा रूपान्तरित गरिएको थियो, प्रसिद्ध अभिनेता प्याट्रिक डेम्प्सेले अभिनय गरेका थिए। यो उपन्यास दुई महत्त्वपूर्ण पुरस्कार बाट सम्मानित भएको छ कि नोट गर्नु पर्छ:
फ्रेन्च एकेडेमीको उपन्यासको लागि ग्रान्ड पुरस्कार
प्रििक्स गोन्कोर्ट डेस लाइसेन्स, विद्यार्थीद्वारा पुरस्कृत
यो एउटा अपराध रहस्य उपन्यास हो जुन २०० 2008 मा शुरू हुन्छ। यो न्यू हैम्पशायरको सानो शहर अरोरामा सेट गरिएको छ। कथा प्रस्तुत गर्दछ मार्कोस गोल्डम्यान young एक युवा लेखक—, जो न्यूयोर्कमा बस्छन् र दबाबमा छन् आफ्नो दोस्रो साहित्यिक कार्य समाप्त गर्न। प्रेरणाको खोजी गर्दा उनले थाहा पाए कि साथी र प्रख्यात लेखक ह्यारी क्वाबर्टमाथि जवान नोला केल्लर्गनको हत्याको अभियोग लगाइएको छ र यो घटना १ 1975 XNUMX को समयमा घटेको थियो।
मार्कोस आफ्नो प्रवृत्तिबाट राजी भए, उनको गुरु क्विबर्ट निर्दोष छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछन, त्यसैले उनले यो रहस्य पत्ता लगाउन मद्दत गर्न अरोड़ा जाने निर्णय गरे। त्यहाँ यो अतुलनीय उपन्यासको प्लट सुरू हुन्छ, जुन विभिन्न कालखंडहरू - १ 1975 1998, १ 2008 XNUMX and र २००—— र बिभिन्न सेटिंग्स बिच ठाउँ लिन्छ। यति धेरै खोजहरूको बीचमा, मार्कोस अनुसन्धानको समानान्तरमा यस केसको बारेमा पुस्तक लेख्न थाल्छ। यस कथानकको अन्त्य लामो, जटिल र रमाईलो यात्रा पछि आउँनेछ।
यो डिकर द्वारा प्रकाशित तेस्रो उपन्यास हो। केहि चाखलाग्दो कुरा के हो भने योसँग यसको नायक मार्कोस गोल्डम्यानको जस्तै छ ह्यारी क्युबर्ट केसको बारेमा सत्यता. यद्यपि, यद्यपि केहीले ध्यान केन्द्रित गर्न कोशिस गरे कि यो सब भन्दा बेच्ने हिटको सिक्वेल हो, सत्यबाट केहि पनि हुन सक्दैन। सायद दुईवटा बिचको बिचको सम्वन्ध भनेको केवल उही मुख्य चरित्र हो। बाँकी, यो नयाँ कार्य भनेको पारिवारिक नाटक हो जुन गोल्डम्यान जातिको सदस्यहरूको सम्बन्ध पतनमा आधारित छ।
मोन्टक्लेयर गोल्डम्यानहरू - मार्कोसको पक्ष - न्यू जर्सीमा बस्ने मध्यमवर्गीय परिवार हो। यसको ठीक उल्टो, बाल्टीमोर गोल्डम्यानहरू - जो यस शहरमा बस्छन् - पैसा र विलासिताद्वारा घेरिएका छन्। २०१२ मा, मार्कोस, विगतको समयको सम्झनामा अभिभूत भएका जुन उनीहरू खुशीसाथ साझा गर्थे, उनले विवरणहरू खोज्ने निर्णय गरे जसले परिवारलाई विघटन भएको बेलामा उनलाई थाहा दिने थियो। यो गर्नका लागि, मुख्य पात्र बाल्टिमोरमा यात्रा गर्दछ, जहाँ प्लट पूर्ण रूपमा विकास भएको छ।
अलि अलि गरी, पारिवारिक अनुभवहरूको दोहोरिने सम्झनाको बीचमा, गोल्डम्यान बैंकरप्सीको लागि मार्ग छोडेको कालो लुकेका सत्यहरू प्रकट हुन्छन्। सुत्र मार्कोसको विभिन्न सम्झनामा एक पहेली जस्तै जारी गरिएको छ, जसको अर्थ पाठक सबै कुरामा सतर्क हुनुपर्दछ र नाटकको वरिपरि तिनीहरूको अन्तिम निष्कर्षहरू मिलाउनु पर्छ।
बाल्टीमोर पुस्तक ...
-बर्षको ब्रेक पछि, डिकरले आफ्नो चौथो उपन्यास प्रस्तुत गरे, फेरि रहस्य मा शर्त। यो एक कहानी हो जुन हम्पाटन्समा अवस्थित ओर्फिया भन्ने स्पामा लिइन्छ। यो सबै १ 1994 XNUMX in मा शुरू हुन्छ, जब शमूएल पालाद्दीनले आफ्नी पत्नी मेघनको खोजी गरिरहे। पछि, उक्त व्यक्तिले मेयर गोर्डनको घरको अगाडि आफ्नी पत्नीलाई मृत भेट्टाए।
मानौं कि माथि उल्लेखित दुखद थिएन, सबै खराब हुन्छ। पलादिन, व्याकुल, आधिकारिकको सम्पत्तीमा प्रवेश गर्ने निर्णय गर्दछ र एक भयानक र रगत दृश्य सामना गर्दछ: भित्र सबै जना मरे। दुई जना पुलिसकर्मी (जेसी रोजेनबर्ग र डेरेक स्कट) अनुसन्धान गर्दै “हत्यारा” पक्राउ गर्ने जिम्मामा थिए।
२० बर्ष बर्ष पछि, स्कट आफ्नो पार्टनर रोजेनबर्गको अवकाश समारोहमा मिल्छ; पत्रकार पनि त्यहाँ देखा पर्छन् स्टेफनी मेलर। उनको आरोप लगाउँछ कि अन्वेषकहरूले गल्ती गरे, र गलत व्यक्तिलाई १ 1994 XNUMX। को चौगुना अपराधको लागि पक्राऊ गरे। त्यो टिप्पणीले अफिसरहरूमा शंका उत्पन्न गर्दछ। तब मेलर रहस्यमय ढंगले हराउँदछ, जसले जनसंख्यामा षड्यन्त्र उत्पन्न गर्दछ। ठीक त्यो क्षणमा विगत र वर्तमान बीचको सुरागहरूको लागि खोजी अन्ततः पजललाई सँगै राख्न थाल्छ जुन अप्रत्याशित सत्यतर्फ जान्छ।
यो पछिल्लो उपन्यास मा, साहित्यिक विजेता रहस्य मा शर्त गर्न को लागी। अहिले मुख्य चरण स्विस आल्प्समा अवस्थित छ, विशेष गरी विलासी होटल पलासिओ डे वर्बियरमा २०१ 2014 को जाडोमा। त्यहाँ एक प्रसिद्ध स्विट्जरल्याण्डको निजी बैंकका कर्मचारीहरू बसिरहेका थिए जसले नयाँ निर्देशकको घोषणा गर्न बैठक बस्ने थिए। अपोइन्टमेन्टको रातमा - कोठा 622२२ मा - संस्थाको निर्देशक मध्ये एकको हत्या गरियो। यस मामलाको गम्भीरता भए पनि, अपराध स्पष्ट गरिएको थिएन र सजाय दिइयो।
घटना पछि चार बर्ष पछि - २०१ 2018 को गर्मीमा - एक युवा र प्रख्यात लेखक (जसले लेखक, जेल डिकरको समान नाम बोक्दछन्) होटलमा बस्छन्।। एक व्यक्ति एक प्रेम असफलता र आफ्नो सम्पादक को शारीरिक गुमाए पछि आफूलाई सफा गर्न कोशिस गर्दैछ। यो आशा नगरी ऊ स्कार्लेटलाई भेट्छ, एक सुन्दर युवा महत्वाकांक्षी उपन्यासकार, जसले २०१ that को जाडोमा उनको रहस्यमय अनसुलझदो हत्याको विवरण सुनाएर परिचय गराउँछ। त्यो क्षण देखि, दुबै अनुसन्धान मा जान प्रेम संघर्ष र विश्वासघातको बीचमा ढीला अन्तमा बाँध्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » जेल डिकर द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू